University of Lübeck - Thola Imfundo Ephakeme e-Germany, Europe
University of Lübeck Yokuxhumana
Ungakhohlwa xoxa University of Lübeck
Bhalisa at University of Lübeck
Ngo 1973, University of Lübeck baba yisikhungo esizimele ngokwesayensi isimo Schleswig-Holstein. Sinikeza izinhlelo degree kwezokwelapha, isayensi yekhompyutha, engineering, nesayensi yemvelo. izinhlelo imikhakha eyahlukene ezisabalele natural sciences, isayensi yekhompyutha, nemithi anikele ezingokoqobo futhi up-to-date imfundo kusekelwe indinganiso ephakeme kakhulu kwezempilo. Izimo lapha yokuthuthukisa nangokusebenzisa ubuchwepheshe ezintsha, ukuhlola, futhi ukwelashwa ekahle, ngenxa yalokhu ukubambisana phakathi amandla, futhi ukusebenzisana nezinye izikhungo eLübeck, Research Center Borstel, Medical Centre Laser, futhi amabhizinisi endawo. Teaming-up ne zikazwelonke nezamazwe ngamazwe Research Institutes sisenza izinga yocwaningo eyunivesithi yethu, Okwamanje kuchazwe namasimu amabili akhethekile yocwaningo.
Uma iqhathaniswa namanye amayunivesithi, University of Lübeck lincane, nge nje 3,400 abafundi - kodwa inama omuhle uthisha-student ratio. I Ukuma okusezingeni labafundi bethu computer yesayensi nezokwelapha kugcizelela indinganiso ephakeme yokufundisa nemfundo yethu.
Ingabe okuqinisekisiwe ukuzimela kwaso state. Lokhu kudinga ukuba self-governance, ukukoleka ucwaningo ezivelele kwamanye amazwe, ukuhlinzeka imfundo afune izinto ngenkani kwabanye, kwadaleka izifundiswa abasha, kanye nokuqinisekisa abasebenzi kahle abaqeqeshiwe. Thina afeze lezi zinhloso ngezinhlelo imikhakha eyahlukene ezihilela ikhono of imithi, natural sciences, kanye computer science / engineering.
Sinikeza ukunakekelwa full-service ukuze iziguli emtholampilo yethu.
futhi amalungu ayo ehambisana nayo kanye nezikhungo:
Ukuqhuba ucwaningo eziyisisekelo ezintsha kanye nolwazi-eliqhutshwa anhlobonhlobo kwezicelo;
Nikelani enezici, ethuthukisiwe, imfundo esekelwe kucwaningo esisekelweni theory, ngendlela ehlelekile futhi didactically kahle ukwakha ibhuloho emhlabeni wangempela, futhi ubuyekeze lezi njalo;
Lwela setingucuko kanzima okuqhubekayo zonke izinhlelo degree kanye izinyanga, ukuze adale nokuthuthukisa ezemfundo innovative;
Hlanganyela zocwaningo kanye namabhizinisi ezifuywayo international, ikakhulukazi labo esekelwe esifundeni;
Ingabe amazwe ngamakhasimende kanye wokuncintisana;
Hlelani ngokuzibophezela lekusasa ukhulisa nyuvesi, amandla ayo kanye nomtholampilo, futhi kuthuthukise nokubaluleka kwazo;
Ukuqinisekisa amazinga aphezulu quality for wonke amasevisi;
Yima for ukubekezelelana kanye nokuxhumana wemfanelo phakathi wonke amaqembu eyunivesithi kanye izimiso sabantu abalinganayo, ikakhulukazi phakathi kwamadoda nabesifazane, futhi senze umzamo ukugcwalisa lezi;
Khuthaza amalungu azo ukuba bathwale imithwalo yemfanelo;
Dala emkhathini pro-umndeni kanye nohlaka engavumelana kangcono imfundo nemisebenzi nokuphila komkhaya;
Yenza umsebenzi wokunakekela, kwezomnotho, futhi ngendlela abanekhono ukusebenzisa izinsiza baphathiswe ngokunakekela futhi ngendlela imvelo-friendly.
Degree Izinhlelo Akufundisa ngesiNgisi
Degree Izinhlelo Akufundisa ngesiJalimane
Yezamakhompyutha Isayensi yezempilo
Nezamabhizinisi Digital Technologies
Yamamolekhula Isayensi yezempilo
1912 Strecknitz Ukwelashwa futhi Care Centre
ngemuva 1945 City Hospital eMpumalanga
3. November 1964 Academy of Medicine of eLübeck (2d bilan Faculty of Medicine of the Christian Albrechts University of Kiel), semester emitholampilo ngoba uhlelo imithi degree
7. May 1973 Medical School of eLübeck
1979 Preclinical Faculty of ISayensi Yemvelo (namuhla: Ikhono Computer Science / Ubunjiniyela ISayensi Yemvelo), abafundi semester zangaphambi basemtholampilo Uhlelo yabo degree yezokwelapha
10. May 1985 Medical University of eLübeck
WS 1993/94 Computer Science hlelo degree
WS 2001/02 Uhlelo Biotechnology Yamamolekhula degree (manje: Yamamolekhula Isayensi yezempilo)
29. ngaphezulu 2002 University of eLübeck
WS 2007/08 Yezamakhompyutha Isayensi yezempilo Uhlelo degree
Medical Engineering Science hlelo degree
Uyafuna xoxa University of Lübeck ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
University of Lübeck kumephu
University of Lübeck Izibuyekezo
Joyina ukuxoxa University of Lübeck.